Wednesday August 08, 2018 - 03:16:19 in Wararka by Super Admin
Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi oo Qaaday Dhabihii Dhaxal-wareejinta Saaxil ee Macalin Siilaanyo Iyo Bulshada Saaxil oo Sida Fiinta uga Qaylisay Shirkad ay Leeyihiin Baashe Morgan & Cumaani oo loo Fasax Inay Dhoofiyan Dhagaxa Buuraha Saaxil+ Fad
Berbera(Xogreebnews)- Shacab-weynaha gobolka Saaxil, ayaa sida Fiinta uga Qayliyey Khayraadka Buuraha oo Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi u Fasaxday Shirkad kamid ah, Shirkadihii ay lahaayeen xubno ka tirsanaa qoyska Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo, isla markaana naas-nuujin lagu siin jiray mashaaric tiro badan. Shirkadan ayaa lagu magacaaba (Horn china Group), waxanay hore usoo qaateen Cabdirisaaq Cumani oo ku magacaaban Mulkiilaha Shirkadaas iyo Baashe Morgan, mashruucuu Boqolaalka Bilyan ku baxeen ee Biyo gelinta Caasimada Somaliland ee Hargeysa, iyo mashaaric kaloo ay Kamid yihiin dhismayaashii labada garoon ee Diyaaradaha Hargeysa iyo Berbera.
Iyadoo haba-yaraatee aanay mashaaricdaasi u fulin sidii loogu talo-galay, balse ay kasoo ifbaxeen musuq-maasuq baahsan oo shirkadaas iyo shoofeeradii hore ee Xukuumadii Madaxweyne Siilaanyo dhaqaalihii loogu talo-galay afka u dhigteen.
Saska shacabka reer Berbera ka qaadeen qoraal ogolaansho ah, oo Wasiirka hawlaha guud Cabdirashiid Qambi Shirkada Horn china Group u ugu fasaxay inay daabushaan dhagaxa yaala laba buurood oo ku yaala Deeganka Lafa-ruug, ayaa shacabku u arkaan Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi hoggaaminaayo mid aan weli ka leexan dariiqii lagu dhaxal-wareejiyey khayraadka Gobalka Saaxil, ee kala duwanaa.
Shacabka qaar Kamid ah, ayaa sheegaya in Shirkadani dhagaxa Buuraha Saaxil laga guranaayo in la dhoofinayo, isla markaana la gaynaayo dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo xogaha arrinkaa la xidhiidhaa tilmaameen inuu qorshahan cusub uu wato Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Baashe Cawil (Moorgan) oo u sodog u yahay Madaxweynihii talada ku wareejiyey Madaxweyne Muuse Biixi.
Xogaha iyo dareenada Shacabka, ayaa dooda mashruucan u arkaa mid aan ahayn sida loo sheegayo, balse la xidhiidhinaya in la boobaayo ama deegaanadan laga guranaayo nooc Kamid ah Macdanta, kaasoo la dhoofin doono.
Halkan hoose kaga Bogo qoraalka Wasiir Qaambi ugu ogolaaday shirkada Cabdirisaaq Cumani oo Ex Madaxweyne Siilaanyo adeer u yahay iyo Baashe Morgan oo isna Sodog Siilaanyo uu yahay ku shuraakoobeen.